एसी सुविधा सहितको सार्वजनिक यातायात चढ्ने हो ? यी रुटमा जानुस् – Etajakhabar
एसी सुविधा सहितको सार्वजनिक यातायात चढ्ने हो ? यी रुटमा जानुस्
काठमाडौंस् काठमाडौंमा एसी सुविधा सहितको बस चल्दै छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर थ्रीफ्ट मल्टिप्रपोज कम्पनीले भोलीबाट काठमाडौंमा सुविधासम्पन्न बसहरु सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । ‘समृद्धि यातायात’ नाममा सञ्चालनमा आउने १० ठूला बसमा एयर कन्डिसनर (एसी)को सुविधा सहितको हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
उपत्यकामा पहिलोपटक सार्वजनिक यातायातमा एसीको सुविधा सहित बस चल्न गालेको हो । बसमा अफलाइन मल्टिमिडियासहित वाइफाइको सुविधा पनि दिइने कम्पनीले जनाएको छ । प्रशस्त स्पेश भएको अपांगमैत्री ४० सिटे बसमा यात्रा गर्न असहज नहुने कम्पनीको दाबी छ ।
१० वटा बसमध्ये ६ वटाले
याँबसपार्क/नारायणगोपाल चोक/रत्पनपार्क/त्रिपुरेश्वर/कालिमाटी/कलंकी, सितापाइला हुँदै नयाँबसपार्कमा परिक्रमा गर्नेछन् । ४ वटा बसहरु भने याँबसपार्कस्चाबहिलरएपरपोर्ट, तीनकुनेरनयाँबानेश्वरररत्नपार्क आएर सोही रुट भएर फर्किनेछन् ।
बसमा अपांगलाई दुई वटा ह्वीलचियर अट्ने स्पेश समेत उपलब्ध गराइएको छ । यसले देशको सार्वजनिक यातायात सुधारोन्मुख छ भन्ने कुराको पुष्टी समेत गर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ३१, २०७५ समय: १०:०८:३०